कतारबाट फर्केका गोरखाका ४४ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
कोरोना भाइरस संक्रमित गोरखामा एक जना पुरुषको उपचार क्रममा मृत्यु भएको छ ।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिका वडा ७ निवासी ४४ वर्षीय पुरुषको गोरखा अस्पतालमा उपचार क्रममा शनिबार बिहान ५ बजेर ५ मिनेटमा मृत्यु भएको अस्पतालले विज्ञप्तिमार्फत पुष्टि गरेको हो ।
निमोनियाका बिरामी समेत रहेका ती पुरुषको अघिल्लो दिन कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएपछि शुक्रवार राति ९ बजेर ५५ मिनेटमा अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको अस्पतालका नि. मेडिकल सूपरिटेण्डेन्ट डा. नवीन थापाले जनाए । अस्पतालमा ल्याएका उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएपछि अक्सिजन दिएरै राखिएको थियो ।
उनका अनुसार ती पुरुष गत असार १७ मा कतारबाट फर्केर क्वारेन्टाइन बसेका थिए । गोरखाकै च्याङली बिरुवास्थित जीवनज्योति माविको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका उनको भोलिपल्ट असार १८ मा स्वाब संकलन गरिएकोमा असार १९ मा कोरोना पुष्टि भएको प्रवक्ता कृष्ण ढकालले जानकारी दिए ।
यता, शव व्यवस्थापनका लागि अहिले बैठक बसिरहेको अस्पतालका नि. मेडिकल सूपरिटेण्डेन्ट डा. थापाले बताए ।
लकडाउनमा एक चौथाइ कर्मचारी कटौती, १८.२ प्रतिशतले ...
कोरोना संक्रमितकाे उपचारमा खटिँदा स‌ंक्रमणकाे डर ...